Xog: Sababta rasmiga ah ee Axmed Qoor Qoor u diiday muddo kororsiga Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Xog: Sababta rasmiga ah ee Axmed Qoor Qoor u diiday muddo kororsiga...
Xog: Sababta rasmiga ah ee Axmed Qoor Qoor u diiday muddo kororsiga Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa u diiday inuu taageero muddo kororsiga Farmaajo sababo la xiriira lacag malaayiin dollar ah oo kaga maqan dhanka dowladda, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegeysa in Qoor Qoor uu Farmaajo iyo Fahad Yaasin u sheegay in ay siiyaan lacago malaayiin dollar ah oo kaga xayiran dhinaca dowladda, kahor inta aan taageerin muddo kororsiga.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa Villa Somalia u sheegay in go’aanka Golaha Shacabka uu yahay mid aad u qaraar islamarkaana uu ku waayi doono dad badan oo degaanka ah, sidoo kalane uu qeyb ku yeelan doono wixii dalka ka dhaca, sidaas darteedna uusan taageeri karin iyadoo ay waliba dhinaca dowladda kaga maqan tahay lacago mallaayiin dollar ah.
Xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegeysa inuu jiro tuhun dhanka Villa Somalia ka jira oo ah Qoor Qoor uu damacsan yahay in markii uu lacagtiisa helo uu ka bixi doono ballanta taageeridda muddo kororsiga, taasi oo keentay inaan lacagta loo fasaxin.
Maalinkii lagu dhowaaqay muddo kororsiga, waxaa si qasab ah baraha bulshada maamullada HirShabelle iyo Koonfur Galbeed loogu daabacay warqad ay taageereen oo ay soo diyaarisay madaxtooyada, hase yeeshee Galmudug waa ay diiday warqaddaas, waxaana sidoo kale ay beenisay inay wax shaqo ah ku leedahay.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa Madaxweyne Qoor Qoor la saaray culeys badan oo kaga imanaya mucaaradka iyo muxaafadkaba kadib markii uu ka gaabsaday arrinta muddo korarsiga, oo uu ilaa hadda uusan si shaacsan uga hadal.
Si kastaba, Qoor Qoor ayaa laba maalmood kahor muddo kororsiga wareysi uu bixiyey ku diiday muddo kororsiga, waxaana la fahamsan yahay inay aheyd farriin cadaadis ah oo uu u diray dowladda si ay lacagta u fasaxdo.
Madaxweyne Qoor Qoor iyo Guudlaawe ayaa xalay u sheegay musharaxiinta mucaaradka inaysan taageeri doonin muddo kororsi, waxaana la filayaa inay mowqifkooda si rasmi ah u shaaciyaan. Qoor Qoor ayaa hadda ka quustay lacagtii uu ka sugayey Villa Somalia.